Zandarimariam-pirenena: Nitondra fanazavana momba ilay tovovavy Britanika nitsambikina fiaramanidina
mercredi, 07 août 2019 22:31
Nampahafantatra ny zava-nitranga tamin'ilay tovovavy Britanika nitsambikina avy eny ambony fiaramanidina ny avy ao amin'ny Zandarimariam-pirenena.
Tamin'ny 25 jolay lasa teo dia nisy teratany Britanika vavy 21 taona nitsambikina teny ambon'ny elidranon'ny Mahajamba.
Io tovovavy io dia mpianatra mpikaroka itony karazana drakaka (crabe) itony. Tsy nahomby anefa ny fikarohana nataony ka niteraka fahakiviana sy fahadisoam-panantenana taminy, ka nanomboka tsy tomombana ny sain'ity ramatoa kely ity.
Nisy ny fifaneraserana nataony tamin'ny ray amandreniny ka nanapa-kevitra ireto farany ny hampody azy, ary hanajanona ilay fikarohana nataony.
Tamin'izay anefa dia nisy teratany Britanika nanao fizahantany tao amin'ny hotely nipetrahan'ity tovovavy ity, izay manodidina ny 50 taona teo ho eo, ny anarany moa dia i Root Johnson, izay efa nahavita ny fitsidihany teto Madagasikara ary nifampiresaka tamin'ireo ray aman-drenin'ilay tovovavy, izay nilaza fa mampiahiahy ny firesany ao amin'ny téléphone.
Ny andron'ny 24 jolay moa ity tovovavy ity dia tsy nety nihinan-kanina mihitsy, izay notambatambazina. Ny 25 jolay, tonga ny fotoana handehanana ka niondrana tamin'ny fiaramanidina ity tovovavy, rehefa teny ambony dia novohain'ity tovovavy ny varavaran'ny fiaramanidina, ka tsy tana izy, satria ilay ramatoa teo akaiky efa nahazo taona ka tsy nahasambotra azy.
Efa natao ny fikarohana sy famotorana rehetra ka Zandary telo no nanao izany fikarohana izany, nisy ihany koa ny fikarohana niarahana tamin'ny AQUALMA teny an-dranomasina.
Folo andro mahery taty aoriana dia hita ny sasany tamin'ny taolam-balony, ny karandohany, ny taolan-damosiny ary ny feny ilany. Izay no hita ka endrasana eny ivato izy androany hariva. Hisy ny autopsie atao aminy, ary avy eo dia atolotra ny ambasady britanika ny fandefasana azy any an-tanindrazany.
Nisy ny ezaka nataon'ny Zandarimariam-pirenena niarahana tamin'ny Fokonolona.